ဝါဒဖြန့်ချိသူများသည် WHO ၏ ICD-11“ ညစ်ညမ်းသောလိင်စွဲလမ်းမှုနှင့်လိင်စွဲလမ်းမှုကိုငြင်းပယ်ခြင်း” ဟုမှားယွင်းစွာစွပ်စွဲထားသောအုပ်စုတူအဆင့်တူပြန်လည်သုံးသပ်သည့်စာတမ်းများနှင့် ICD-11 ရှာဖွေရေးအင်္ဂါရပ်များကိုမှားယွင်းစွာဖော်ပြခြင်း - Your Brain On Porn
porn စွဲ၏ deniers ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ရဲ့ဆေးပညာဆိုင်ရာရောဂါရှာဖွေ manual ၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းဖြစ်သောကြောင့်ပူပနျခွငျးနေကြတယ်, ရောဂါ၏နိုင်ငံတကာခွဲခြားရေး (ICD-11), သစ်တစ်ခုရောဂါပါရှိသည် porn စွဲနှင့်လိင်စွဲနှစ် ဦး စလုံးဖော်ထုတ်ရန်သင့်လျော်သည်။ ခေါ်တယ် "compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ Disorder။ " တာဝန်ရှိသည့်ဆောင်းပါးအတွက် WHO ၏တရားဝင်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကိုကိုးကားခြင်း၊ ခရစ်ယာန် Lindmeierအဆိုပါ ICD-11 ယူ အဘယ်သူမျှမ စွဲလမ်းအပေါ်ရပ်တည်ချက်ကို။ "[အဆိုပါ ICD-11] ဟူသောဝေါဟာရကိုမသုံးပါဘူး လိင်စွဲလမ်း ကျနော်တို့ကဇီဝကမ္မတစ်ခုစွဲသို့မဟုတ်မရှိမရှိအကြောင်းအနေအထားယူပြီးကြသည်မဟုတ်လို့ပဲ။ "
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, ဝါဒဖြန့်ချီရေး "ကျနော်တို့ရှုံးနိမ့်ပေမယ့်ငါတို့အနိုင်ရ" ထူးထူးဆန်းဆန်းအတွက် deniers တစ် ဦး အဖြစ်ဤရောဂါအသစ်လှည့်ရန်ရပ်တန့်အားလုံးဆွဲထုတ်နေကြသည် ြငင်းပယ်ခြင်း "စွဲလမ်းမှု" နှင့် "စွဲလမ်းမှု" နှစ်ခုစလုံး သူတို့၏အခိုင်အမာသည်အဓိပ္ပာယ်မဲ့သည်
ICD-11 နှင့် DSM5 တို့ကစွဲလမ်းမှုကိုဖော်ပြရန်“ စွဲလမ်းမှု” ဟူသောစကားလုံးကိုမည်သည့်အခါကမျှအသုံးပြုခြင်း - လောင်းကစားခြင်း၊ ဘိန်းဖြူစွဲခြင်း၊ ရောဂါရှာဖွေရေးလက်စွဲနှစ်ခုစလုံးသည်ဆေးစွဲခြင်း (“ လောင်းကစားဆိုင်ရာရောဂါ”“ နီကိုတင်းသုံးစွဲမှုရောဂါ”) အစား“ disorder” ဟူသောစကားလုံးကိုအသုံးပြုသည်။ ထို့ကြောင့် "လိင် စှဲမွဲမှု"နှင့်" porn စွဲလမ်း " သူတို့ဟာအဓိကရောဂါရှာဖွေရေးလက်စွဲထဲမှာတရားဝင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားအောက်မှာဘယ်တော့မှကြောင့်, ပယ်ချခဲ့ပါပြီဘယ်တော့မှနိုင်ဘူး။ ရိုးရိုးလေးပြောရမယ်ဆိုရင် "porn စွဲလမ်းမှု" ဆိုတဲ့ရောဂါဘယ်တော့မှမရှိတော့ပါဘူး။ သို့သျောလညျးရောဂါနှစ်ခုလုံး ICD-11 ၏ပြprovisions္ဌာန်းချက်များကို အသုံးပြု၍ ရောဂါရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။
"compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ Disorder '(CSB သို့မဟုတ် CSBD) "လိင်စွဲလမ်း" နှင့် "porn စွဲ" ကိုထီးသက်တမ်းအဖြစ်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုသငျတို့သထိုကဲ့သို့သော "ထိန်းချုပ်မှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူထဲက", "hypersexuality", "ဘာစွဲ," စသည်တို့အဖြစ်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ, ဖော်ပြရန်အသုံးပြုသောမြင်ကြပြီဆိုအခြားဝေါဟာရကို - ထောက်ပံ့လူနာ / client များ CSBD များအတွက်စံတွေ့ဆုံရန်။
2020 ၏အဖြစ် 52 မှ neuroscience-based လေ့လာမှုများ နာတာရှည် porn အသုံးပြုသူများနှင့် CSB နှင့်အတူရှိသူများအပေါ်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ မူးယစ်ဆေးစွဲသူများနှင့်ပတ်သက်သည့်လေ့လာမှုများတွင်တွေ့ရသောသူများအားထင်ဟပ်စေသော ဦး နှောက်၊
မှာပျံ့နှံ့နေတဲ့အောက်ပါမျက်နှာပြင်ပုံ, လိုလားတဲ့ porn propagandist ရဲ့လူမှုမီဒီယာအကောင့် (မှဖန်တီးသည် နီကိုးလ် Prause), အင်္ဂါရပ်များ အ ICD-11 သည်“ လိင်စွဲလမ်းမှုနှင့်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကိုငြင်းပယ်သည်” ဟူသောအဓိကသက်သေသာဓကဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ ဂျွန် Grant ကဝေဖန်သုံးသပ်ချက်မှကောက်နုတ်ထားပြီးအာရုံစူးစိုက်မှုတိုတိုကိုတွက်ချက်သည်ဝါဒဖြန့်ချိသူများကသင်စာပိုဒ်၏အဘယ်အရာကိုလျစ်လျူရှုမည်ကိုမျှော်လင့်ကာ၊ တကယ်တော့ ပြည်နယ်များ:
သငျသညျအနီရောင်-box ကိုထင်ယောင်ထင်မှားများအတွက်ကျဆင်းသွားလျှင်, သင်အဖြစ်အထက်ပါကောက်နုတ်ချက်ဆနျ့:
... ညစ်ညမ်းကြည့် ... တစ်ဦးရောဂါအဖြစ်က၎င်း၏ပါဝင်တရားမျှတရန်ဤအချိန်တွင်အလုံအလောက်သိပ္ပံနည်းကျသက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ်ရှိမရှိမေးခွန်းထုတ်စရာ။ ကန့်သတ်လက်ရှိဒေတာအပေါ်အခြေခံပြီးပြုလုပ်ထို့ကြောင့် ICD-11 ထဲမှာထည့်သွင်းရန်အချိန်မတန်ထင်ရပေသည်။
သို့သျောလညျးကမုသားပဲ။ Jon Grant 2014 စာတမ်းပါ အဆိုပါ ICD-11 အတွက် Impulse ထိန်းချုပ်မှုမမှန်နှင့် "အမူအကျင့်စွဲလမ်း"။ အဆိုပါ Read တစျခုလုံးကို အပိုဒ်နှငျ့သငျ Jon Grant ကအကြောင်းပြောနေတာကြောင်းမြင်ရပါလိမ့်မည် "အင်တာနက်ကိုဂိမ်းရောဂါ" မဟုတ် ညစ်ညမ်း။ Grant ကယုံကြည်သည် ကအလုံအလောက်သိပ္ပံနည်းကျသက်သေအထောက်အထားမှာရှိခဲ့ခြင်းရှိမရှိမေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်ခဲ့သည် ထို တရားမျှတရန်အချိန် တစ်ဦးရောဂါအဖြစ်အင်တာနက်ကဂိမ်း Disorder ရဲ့ပါဝင်:
လယ်ပြင်၌တစ်ဦးကတတိယသော့ချက်အငြင်းပွားဖွယ်ရာပြဿနာကအင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုသီးခြားလွတ်လပ်သည့်ရောဂါရှိမရှိဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါလုပ်ငန်းအဖွဲ့ကဒီတစ်ပင်သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောခွအေနအေဖြစ်ပြီး, အင်တာနက်ကို၏အသုံးပြုမှုကိုတကယ်တော့ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်ကမောက်ကမဖြစ်မှု (ဥပမာ, ရောဂါဗေဒဂိမ်းကစားသို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှု) ၏ပုံစံအမျိုးမျိုးများအတွက်ဖြန့်ဝေမှုစနစ်ဖွဲ့စည်းစေမည်အကြောင်းမှတ်ချက်ချသည်။ အရေးကြီးတာက, ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းနှင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါများ၏ဖော်ပြချက်ကပိုရိုးရာ setting များကိုအပြင်, ဒါမှမဟုတ်သီးသန့်ဖြစ်စေ, ထိုကဲ့သို့သောအပြုအမူတိုးကအင်တာနက်ဖိုရမ်များကို အသုံးပြု. ရှုမြင်ကြသည်ကိုသတိပြုပါသင့်တယ် 22,23. အဆိုပါ DSM-5 ပါဝင်သည်ထားပါတယ် အင်တာနက်ကဂိမ်းရောဂါ အပိုင်း "နောက်ထပ်လေ့လာမှုများအတွက်အခြေအနေများ" ၌။ နားလည်ရန်အလားအလာအရေးပါသောအပြုအမူများနှင့်အချို့သောနိုင်ငံများရှိမြင့်မားသောပရိုဖိုင်းနှင့်အတူဆက်ဆက်တဦးတည်းဖြစ်သော်လည်း 12ဒါကြောင့်အပြစ်လွတ်စေဤအချိန်တွင်အလုံအလောက်သိပ္ပံနည်းကျသက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ်ရှိမရှိမေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်ပါသည် ယင်း၏ပါဝင် တစ်ဦးရောဂါအဖြစ်။ ကန့်သတ်လက်ရှိဒေတာအပေါ်အခြေခံပြီးပြုလုပ်ထို့ကြောင့် ICD-11 ထဲမှာထည့်သွင်းရန်အချိန်မတန်ထင်ရပေသည်။
စာဖတ်ခြင်းမပါဘဲ သာ အထက်ပါကောက်နုတ်ချက် Jon Grant ကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုယုံကြည်သည်ဖော်ပြသည်အနီရောင်ရင်ပြင်, နိုင် တစ်ခုချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်ရောဂါဖြစ်, ထိုသို့ "compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ Disorder '(CSBD) ၏ထီးရောဂါအောက်တွင်ကျရောက်ပါတယ်။ ဒါက propagandists အားဖြင့် Tweet လုပ်ခဲ့သည် "အနီရောင်စတုရန်း" ထင်ယောင်ထင်မှား၏အတိအကျကိုဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပါတယ်။
Jon Grant ကအမှန်တကယ်ပဲ Grant ကန့်နှစ်ခုဆင့်မဟုတ်ဘဲတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကဖွင့် (1) compulsive porn အသုံးပြုမှု compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ Disorders အောက်မှာခွဲခြားမရနိုင်ခြင်းစက္ကူ4နှစ်အတွင်းအသက် (2) အဖြစ်ပြုလုပ်ဆီလျှော်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုပါတယ်နှင့်ဖူးရင်တောင် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့နေဖြင့်အနေအထားစက္ကူ။ ထို့အပြင်တစ်ဦးစာရေးကွား 4.5 နှစ်များတွင်ပြောင်းလဲခဲ့ပါသည်။ စကားမစပ်, အင်တာနက်ဂိမ်း Disorder ဖြစ်ပါသည် ယခု WHO ကရဲ့ ICD-11 အတွက်, စွဲလမ်းအပြုအမူတွေအောက်မှာ။
CSB ဘာသာရပ်များအပေါ် 37 အာရုံကြောလေ့လာမှုများ၏ပထမဦးစွာ 44 ဤစာမျက်နှာတွင်ဖော်ပြထားသော ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည် ပြီးနောက် အဆိုပါ 2014 Jon Grant ကစက္ကူ။ ဒုတိယအချက်မှာ Jon Grant ကလာမည့် ICD-2018 အတွက် CSBD ၏ပါဝင်မှုကြေညာ (နှင့်အတူသဘောတူ) ဒီ 11 စက္ကူပေါ်မှာ Co-စာရေးဆရာဖြစ်ခဲ့သည်: အဆိုပါ ICD-11 အတွက် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါ။ တတိယအချက်ကတော့ Jon Grant ၏ ၂၀၁၈ စာတမ်းပါcompulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူမြား: A nonjudgmental ချဉ်းကပ်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုအပြုအမူဆိုင်ရာအပြုအမူကိုလည်း“ လိင်စွဲလမ်းမှု” ဟုခေါ်သည်။
compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (CSB), လည်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲသို့မဟုတ် hypersexuality အဖြစ်ရည်ညွှန်း , လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်နှင့်အတူထပ်တလဲလဲနှင့်ပြင်းထန်သောအတွက်အဆက်မပြတ်ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာတိုကျတှနျးထားလျက်, တစ်ဦးချင်းစီမှဒုက္ခခံစားခဲ့ရနှင့် / သို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့ယွင်းမှုဖြစ်ကြောင်းအပြုအမူတွေဖြစ်ပါတယ်။
အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ ထိုကဲ့သို့သော Prause အဖြစ် propagandists တစ် Jon Grant ကစက္ကူရှေ့နောက်မှ4နှစ်ပေါင်းကျောရောက်ရှိနေကြပါတယ်- Grant ၏မကြာသေးမီကထုတ်ပြန်ခဲ့သော ၂၀၁၈ စက္ကူကပထမပထမဝါကျတွင် CSB သည်လိင်စွဲလမ်းကြောင်းဖော်ပြသည်။
အဆိုပါ ICD-11 တစ်ခုတိကျစာရင်းကိုင်အဘို့, လိင်ကျန်းမာရေးတိုး (ခါးပန်း) သည်အသုံးပြုလူ့အဖွဲ့အစည်းဖွငျ့ဤမကြာသေးမီဆောင်းပါးတွေ့မြင်: "compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ" စိတ်ကျန်းမာရေး Disorder အဖြစ်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO တို့ကခွဲခြားထားသည်။ ဒါဟာဖြင့်အစပြု:
ဆန့်ကျင်ဖက်အားလှည့်ဖြားသည့်ကောလာဟလအနည်းငယ်ရှိသော်လည်း WHO သည်“ အပြာစွဲခြင်း” သို့မဟုတ်“ လိင်စွဲလမ်းမှု” ကိုငြင်းပယ်သည်မှာမမှန်ပါ။ CSBD သည်“ လိင်အရစွဲလမ်းမှု” နှင့်“ လိင်စွဲလမ်းမှု” (“ hypersexuality” နှင့်“ ပြင်ပထိန်းချုပ်မှုဆိုင်ရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ”) နှစ်ခုစလုံးကိုစစ်ဆေးရန်ခွင့်ပြုထားသောထီးဝေါဟာရတစ်ခုဖြစ်သည်။
လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်ကထုတ်ဝေခဲ့သော YBOP မှဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်လည်းရှိသည်။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ရဲ့ ICD-11: compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ Disorder
YBOP အထက်ပါအပိုင်း, porn စွဲ posted အဆိုပါနေ့ကအပြီး denier နီကိုးလ် Prause လှည့်စားသော“ red square” စခရင်ရိုက်ကူးခြင်းကိုရပ်တန့်လိုက်ပြီး ICD-11 search box တွင် Nicole Prause ၏“ စွဲလမ်းမှု” အားရှာဖွေနိုင်သည့် GIF ဖြင့်ထပ်တူလိမ်လည်လှည့်စားသည့် GIF ဖြင့်အစားထိုးခဲ့သည်။ သေချာသည်မှာ ICD စနစ်သည်မူးယစ်ဆေးဝါးအနည်းငယ်နှင့်သက်ဆိုင်သော“ စွဲလမ်းမှု” ၏ရလဒ်အချို့ကိုပေးသည်။ စသည်တို့ဖြစ်သည်။ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်စေရန် ICD သည်“ စွဲလမ်းမှု” ဟူသောအသုံးအနှုန်းကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုသည်။ သို့သော်လိင်နှင့် (သို့) ရုပ်ရှင်များတွင်အသုံးပြုရန်အတွက်“ စွဲလမ်းမှု” ဟူသောဝေါဟာရကိုအထူးသဖြင့်ငြင်းပယ်သည်။။ " Prause ၏ရှာဖွေမှုမျက်နှာပြင်
အဓိကအချက် - ရှာဖွေတဲ့အခါရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့အခါ "စွဲလမ်းမှု" (အပေါ်မှအနီရောင်) ဟူသောစကားလုံးပေါ်လာသည် - ၎င်းစကားလုံးသည် ဘယ်နေရာမှာတွေ့လိမ့်မည် သငျသညျစွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးတစ်ခုရောဂါအပေါ်ကိုနှိပ်ပါတခါ။ ဥပမာအားဖြင့်“ အရက်သုံးစွဲမှုကြောင့်ဖြစ်သောရောဂါများ” ကိုစဉ်းစားပါ။
ICD-11 ရှာဖွေရေးအင်္ဂါရပ်သည်ဆေးသမားများ (သို့မဟုတ်အခြား visitors ည့်သည်များ) သို့ရောဂါများကိုရှာဖွေရန်တစ်ခုတည်းသာရှိသည်။ သူတို့က (မှားယွင်းစွာ) "စွဲ" ဟူသောစကားလုံးတွင်ထည့်သွင်းပါက၎င်းသည်မှန်ကန်သောရောဂါများကိုညွှန်ပြသည်။ နောက်ထပ်တစ်ခါ, ICD-11 တွင်“ စွဲလမ်းမှု” ဟုတံဆိပ်တပ်ထားသောအခြေအနေတွင်မရှိပါ။ စွဲလမ်းစေသောမူးယစ်ဆေးဝါးများသို့မဟုတ်စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူများအတွက်ခေါင်းစဉ်ခွဲများတွင်“ စွဲလမ်းမှု” မရှိပါ။။ အောက်ကပုံကိုကြည့်ပါ။
ကြောင့်များ၏ပါဝင်မှုပတျဝနျးကငျြပြင်းစွာသောအနိုင်ငံရေးကိုဖို့ "compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါ," ကယခုအဘို့, လောင်းကစားဝိုင်းတစ်ချိန်ကခဲ့သကဲ့သို့ "Impulse ထိန်းချုပ်မှုရောဂါ" အောက်တွင်ခွဲခြားထားပါသည်။ အတွက် ICD အတွင်းအားဖြင့်ကရှင်းပြသည်အဖြစ်ဤအငြင်းပွားဖွယ်ဖြစ်ပြီး, အနာဂတျမှာပြောင်းလဲနိုင်ပါသည် ဤ ကမ္ဘာ့ဖလားစိတ်ရောဂါကုသမှု စက္ကူ.
ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရရင်အသစ်က“compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစွဲသူများ၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာကြည့်တိုက်စွဲသူများ၊ hypersexuals များနှင့်မထိန်းချုပ်နိုင်သောသို့မဟုတ်အတင်းအဓမ္မလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများပါ ၀ င်သူများပါ ၀ င်သည်။
Jon Grant ၏ ၂၀၁၄ စာတမ်း၏နီကိုးလ်ပရာ့စ်၏မှားယွင်းစွာတင်ပြခြင်း (နှင့်ပုံပန်းသဏ္ဌာန်တူခြင်း) ဥပမာများ
Quora အပေါ်စက္ကူပေးသနားဖို့ links
သူမ၏နောက်လိုက်တစ်ဦးတို့ကကူးယူနှင့် Tweet လုပ်ခဲ့:
UCLA နီကိုးလ် Prause ရဲ့စာချုပ် (နှောင်းပိုင်းတွင် 2014 / အစောပိုင်း 2015) သက်တမ်းတိုးမပေးခဲ့ပါဘူး။ အဘယ်သူမျှမရှည်တစ်ခုပညာသင်နှစ် Prause ရှိပါတယ် မျိုးစုံမှတ်တမ်းတင်ဖြစ်စဉ်များနှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့်အသရေဖျက်မှုအတွက်စေ့စပ် သူမ၏ကောက်ချက်နှင့်အတူသဘောမတူသူမည်သူမဆိုကဲ့ရဲ့ခံရဖို့ထိုက်တန်ပါတယ်ကြောင့်လူတွေဆွဲဆောင်ဖို့ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော "astroturf" ကင်ပိန်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်။ Prause တစ်စုဆောင်းထားသည် ရှည်လျားသောသမိုင်း အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကနေပျက်ဆီးအထောက်အထားအစီရင်ခံရန်ဝံ့တဲ့သူစာရေးဆရာ, သုတေသီများ, ကုသ, သတင်းထောက်များကိုနှင့်အခြားသူများနှောင့်ယှက်၏။ သူမသည်ဖြစ်ပေါ်လာသော အဆိုပါညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အတူအတော်လေးအဆင်ပြေနေ, ဒီထဲကနေမြင်နိုင်ပါသည်အဖြစ် X-အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်ဝေဖန်သူများအဖွဲ့အစည်း (XRCO) ဆုအခမ်းအနား၏အနီရောင်ကော်ဇောပေါ်သူမ၏၏ပုံရိပ် (ညာဘက်အစွန်ဆုံး)။ (ဝီကီပီးဒီးယားအဆိုပါအဆိုအရ XRCO ဆုပေးပွဲ အမေရိကန်ကပေးတဲ့နေကြတယ် X-အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်ဝေဖန်သူများအဖွဲ့ နှစ်စဉ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူဖျော်ဖြေရေးအတွက်အလုပ်လုပ်လူများနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းဆုစက်မှုလုပ်ငန်းအဖွဲ့ဝင်များအတွက်သီးသန့် reserved ပြသတစ်ခုတည်းသောအရွယ်ရောက်ပြီးသူဖြစ်ပါတယ်။) ။ ဒါဟာအစ Prause ရှိစေခြင်းငှါပုံပေါ် ဘာသာရပ်များအဖြစ်ရရှိသော porn အဆိုတော် အခြားညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းအကျိုးစီးပွားအုပ်စုတစ်စုကတဆင့်, အ အခမဲ့ခွန်းညွန့်ပေါင်း။ FSC မှရရှိသောဘာသာရပ်များကိုသူမတွင်အသုံးပြုခဲ့သည် ငှားရမ်း - သေနတ်လေ့လာမှု ထိုအပေါ် အကြီးအကျယ်စှနျး နှင့် အလွန်စီးပွားဖြစ်ဖြစ်သော“ Orgasmic Meditation” အစီအစဉ် (ယခုဖြစ်ခြင်း FBI ကစုံစမ်းစစ်ဆေး) ။ ချီးမွမ်းခြင်းကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့သည် မထောက်ပံ့တောင်းဆိုမှုများ အကွောငျး သူမ၏လေ့လာမှုများ၏ရလဒ်များကို နှင့်သူမ၏ လေ့လာမှုရဲ့နည်းစနစ်. ပိုပြီးစာရွက်စာတမ်းများအဘို့အတွေ့: နီကိုးလ် Prause သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအတွက် Porn စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအားဖြင့်ဖြစ်သနည်း
Update ကို (နွေရာသီ, 2019): မေလ 8, 2019 တွင် Donald ဟီလ်တန်, MD တစ်ဦးအသရေဖျက်မှုတင်သွင်း se နှုန်း ရုံးတင်စစ်ဆေးမှု နီကိုးလ် Prause & Liberos LLC ဆန့်ကျင်။ ဇူလိုင်လ 24, 2019 တွင် Donald ဟီလ်တန်ကသူ့အသရေဖျက်မှုတိုင်ကြားချက်ပြင်ဆင် (၁) တက္ကဆက်ပြည်နယ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစစ်ဆေးသူဘုတ်အဖွဲ့မှတိုင်ကြားချက်၊ (၂) ဒေါက်တာဟီလ်တန်သည်သူ၏အထောက်အထားများကိုမဟုတ်မမှန်စွပ်စွဲခြင်းနှင့် (၃) အလားတူအနှောင့်အယှက်ပေးခြင်းနှင့်အသရေဖျက်မှုကျူးလွန်ခဲ့သည့်အခြား ၉ ခုမှဝေဖန်မှုများ။ယောဟနျသ Adler, MD, ဂယ်ရီ Wilson က, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes, Stacy အညွှန့်, LICSW, Linda Hatch, Ph.D, Bradley အစိမ်းရောင်, Ph.D, Stefanie Carnes, Ph.D, Geoff Goodman, Ph.D, Laila Haddad.)
Update ကို (နိုဝင်ဘာ၊ 2019): နောက်ဆုံးတွင်အမှတ်စဉ်မှားယွင်းသောစွပ်စွဲသူ၊ အသရေဖျက်မှု၊ “ NoFap မှ Porn စွဲမှုပံ့ပိုးမှုအဖွဲ့မှအဲလက်စ်ရော့ဒ်သည်ညစ်ညမ်းသောလိင်စိတ်ပညာရှင်အားတရားစွဲဆိုလိုက်သည်” ၏ Megan Fox ကဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် PJ မီဒီယာ နှင့် “ နို ၀ င်ဘာလတွင်ဖြစ်ပွားသောစစ်ပွဲများသည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရဖြစ်လာသည်”၏ဒိုင်ယာနာ Davison ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် The Post Millennial။ Davison သည် Prause ၏မတူကွဲပြားသောအပြုအမူများနှင့်ပတ်သက်သည့်ဤ6မိနစ်ဗီဒီယိုကိုလည်းထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ Porn သည်စွဲစွဲလမ်းမှုလော။, နှင့်ဤ Prause ရဲ့နှောင့်ယှက် / မှားယွင်းသောစွပ်စွဲချက်၏အချိန်ဇယား: VSS ပညာရေးစစ်ပွဲအချိန်ဇယား.